သင့်​နာမည် ​ကို ​ကောင်းလှပြီဟု ထင်​​နေ ပါသလား? – Shwewiki.com
သင့်​နာမည် ​ကို ​ကောင်းလှပြီဟု ထင်​​နေ ပါသလား?
သ င့်​နာမည်​ကို ​ကောင်းလှပြီဟု ထင်​​နေပါသလား???
လူတစ်​​ယောက်​အတွက်​ နာမည်​သည်​အ​ရေးပါလှ​ပေသည်​။ လူရယ်​ဟုဖြစ်​လာပြီဆို နာမည်​တစ်​ခုရှိဖို့လိုအပ်​​ပေသည်​။ တစ်​ချို့လဲနှစ်​ခု တစ်​ချို့ကသုံးခု ​လောက်​ရှိမည်​။ တစ်​ချို့ကမ​ရေမတွက်​နိုင်​😂😂ထိုအ​ရေးပါလှ​သောနာမည်​ကို ​မွေးဖွားပြီး မကြာမှီတွင်​​ပေးတတ်​ကြသည်​။ လူတစ်​ချို့ကအလွယ်​​ပေးသည်​။ တစ်​ချို့က​လေးနက်​စွာစဉ်းစားသည်​။ တစ်​ချို့ကနားလည်​တတ်​ကျွမ်းသူများနှင့်​တိုင်​ပင်​ပြီးမှ ​ပေး​လေ့ရှိကြသည်​။
နေ့သင့်​နံသင့်​​တွေ လိုက်​ဖက်​မူ​တွေ လှပမူ​တွေ အထားအသို အညွန့်​အတက်​ အခက်​​အ​ဝေတို့စုံလင်​လှ​ပေသည်​။
တစ်​ချို့နာမည်​များသည်​ ​ခေါ်လို့​ကောင်းသည်​ တစ်​ချို့နာမည်​များသည်​​အေးသည်​ လှသည်​ ။ တစ်​ချို့နာမည်​များသည်​လိုက်​ဖက်​သည်​(ဖြူ​ဖွေးဆိုတဲ့နာမည်​နှင့်​မဲတူး​နေ​သောလူများကိုမြင်​ဖူးကြ​ပေမည်​😂😂) ။ တစ်​ချို့ကမာသည်​ တစ်​ချို့က​ပျော့သည်​။
တနင်္ဂ​နွေ အ၊ဥ၊ဧ စသည်​တို့ဖြစ်​သည်​။
နာမည်​တစ်​ခုစီတိုင်းတွင်​`ဗျည်း၊သရ´တို့ဖြင့်​တည်​​ဆောက်​ထားပြီး ၄င်း`ဗျည်း၊သရ´တို့တွင်​ ဂဏန်းတန်​ဖိုးများသက်​မှတ်​ထားရှိကြသည်​။ဗျည်း၊သရ တို့၏ဂဏန်းတန်​ဖိုးများက​တော့
၁။ အ၊ဥ၊ေ၊ါ၊ိ၊ီ၊ု၊ူ၊ဲ၊ံ့၊်၊း၊ တန်​ဖိုးက ၈
၂။ က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င. တန်​ဖိုးက ၅
၃။ စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည. တန်​ဖိုးက ၆
၄။ ယ၊ရ၊လ၊ဝ၊ျ(ယပင်း)၊ြ (ယရစ်​)၊ွ(ဝဆွဲ) တန်​ဖိုး၃
၅။ ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ. တန်​ဖိုး ၁
၆။ သ၊ဟ၊ှ(ဟထိုး) တန်​ဖိုး ၂
၇။ တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န. တန်​ဖိုး ၇
၈။ ဋ၊ဌ၊ဍ၊ဃ၊ဏ. တန်​ဖိုး ၄ တို့ဖြစ်​ကြသည်​။
နာမည်​တစ်​ခု၏`ဗျည်း၊သရ´ဂဏန်းတန်​ဖိုးများကို​ပေါင်းလိုက်​ခြင်းအားဖြင့်​ နာမည်​တစ်​ခု၏စုစု​ပေါင်းတန်​ဖိုးကိုရရှိ​ပေမည်​။ ရရှိလာ​သောစုစု​ပေါင်းတန်​ဖိုးကို(၈)ဂဏန်းဖြင့်​စား​သော်​ အကြွင်းရရှိ​ပေမည်​။ ရရှိလာ​သောအကြွင်းများကိုမူတည်​၍ နာမည်​အ​ဟောများရှိ​ပေသည်​။ ထိုနာမည်​အ​ဟောများသည်​ ကုန်း​ဘောင်​​ခေတ်​ ​ပေမူ ပရပိုက်​ တို့မှဖြစ်​ပါသည်​။ သင့်​နာမည်​​ကောင်းမ​ကောင်းကိုတွက်​ကြည့်​နိုင်​ပါသည်​။
၄၈÷၈=.စားလဒ်​(၈)၊အကြွင်း(၀)ထို​ကြောင့်​ `​ဇော်​​နေလ´သည်​အကြွင်း(၀)ဖြစ်​၍ `လင်းတ´နာမည်​ဖြစ်​သည်​။
အကြွင်း(၈)သိုမဟုတ်​ (၀) `လင်းတ´နာမည်​အ​ဟော 😀
`လင်းတ´နာမည်​သည်​ ငုပ်​လိုက်​​ပေါ်လိုက်​ဖြစ်​​နေမည်​။ ကိုယ့်​အကြံအစည်​ကိုသူများကလုပြီးလုပ်​ခြင်းခံရတတ်​မည်​။ အရှက်​တကွဲဖြစ်​ဖို့လွယ်​မည်​။စိတ်​မတည်​ မငြိမ်​ဖြစ်​​နေတတ်​မည်​။ဆရာသမား လူကြီးများအတွက်​အနစ်​နာခံရမည်​။
`တံခွန်​´နာမည်​မျိုး​ခေါ်တွင်​ခံရသူများသည်​​ကျော်​ကြား​သော​အောင်​မြင်​သူများဖြစ်​သည်​။ အနုပညာဖြင့်​​အောင်​မြင်​လိမ့်​မည်​။ လူအများနှင့်​ဆက်​နွယ်​ပက်​သက်​​နေပြီး အများကိုကြီးကြပ်​ကွပ်​ကဲအုပ်​ချုပ်​လုပ်​ကိုင်​ရသူဖြစ်​မည်​။ တစ်​ခုထက်​မက​သော အလုပ်​အကိုင်​များကိုတစ်​ပြိုင်​တည်းလုပ်​ကိုင်​ရသူဖြစ်​မည်​။ ​သေလျှင်​​သော်​မှနာမည်​ကျန်​ရစ်​မည်​။ ၄င်းနာမည်​မျိုးများသည်​အတ်ုက်​အခံနှင့်​ယှဉ်​၍​အောင်​မြင်​တတ်​ကြ၏။
`အခိုး´နာမည်​သည်​သြဇာအာဏာတည်​တံ၏။ ဘဝတစ်​​လျှောက်​လုံးတိုးတက်​သည်​ထက်​ တိုးတက်​​အောင်​စနစ်​တကျလုပ်​တတ်​၏။ လူအများနှင့်​စပ်​ဆိုင်​​သောအလုပ်​များကို လုပ်​တတ်​၏။လုပ်​ချင်​သည့်​လုပ်​ငန်းကိစ္စများကိုမဖြစ်​မ​နေလုပ်​တတ်​၏။
`ခြ​င်္သေ့ ´နာမည်​သည်​လူသိများမည်​။​နေရာမရ ရ​အောင်​ကြိုးစားမည်​။ထင်​​ပေါ်​ကျော်​ကြားလူသိများမည်​။ အာဏာတန်​ခိုးကြီးမည်​ ထိပ်​​ကို​ရောက်ပြီးပြန်​ဆင်းတတ်​သည်​။
`ကျား´နာမည်​သည်​အတက်​အကျမြန်​တတ်​၏။ ကံတရားသည်​ ဘီးကဲ့သို့ ​ကောင်းတာလုပ်​လျှင်​​ကောင်းကျိုးခံစားရမည်​။ဆိုးတာလုပ်​လျှင်​ဆိုးကျိုးခံစားရမည်​ဖြစ်​၏။ အတိုက်​အခံယှဉ်​၍အကျိုး​ပေးတတ်​၏။စိတ်​ကူး​ကိုအ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​တတ်​၏။
ကဲမိတ်​​ဆွေတို့လည်းမိမိတို့နာမည်​ကိုတွက်​ချက်​ကြည့်​နိုင်​​ပေမည်​။မိဘ ​မောင်​နှမ ​ဆွေမျိုး သူငယ်​ချင်း နီးစပ်​သူများကိုလည်းတွက်​ချက်​​ပေး၍မန်းရှင်း​ခေါ်​ပေးနိုင်​​လေပြီ။
ဘု ရားအလောင်းတော် မဟာ ဇနကမင်း ၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆ ရာကြီးများက တီထွင်သွားတဲ့ တွက်ကိန်း
ကိုယ်ေ စာင့်နတ် (၁၂)ပါး အား ပူဇော်၍ အကျိုးများအောင်ပြုလုပ်နည်း